Sivavanye iJumping Sumo, idrone yomhloli wamapholi | IPhone iindaba
Sivavanye iParrot Jumping Sumo, idrone yasemhlabeni enomphefumlo womphandi
UJuan Colilla | | Izixhobo ze-IP, IPhone iindaba, Ezahlukeneyo
Los Drones Bayifumene indawo yabo eluntwini kwaye sele bezimisile njengemveliso ebhetyebhetye kakhulu, ukusetyenziswa kwayo kuluhlu lokuba yinto yokudlala eyonwabisayo kwisixhobo somsebenzi seengcali ezininzi.
Ezi zixhobo ziye zithandwa kakhulu sele kukho umdlalo we Umdyarho weedrone, isantya esiphezulu kunye neesekethe ezingenakwenzeka, kwaye ziyonwabisa ngokwenene!
Namhlanje sikulethela enye yazo, inokusetyenziswa nokuba incinci kwaye inomdla kakhulu ekhaya, umhlaba wokutsiba wenziwe ngomphefumlo womphandi, Isikhwenene Ukutsiba uSumo.
Iparrot yenye yezona nkampani zidumileyo kwintengiso yezipho, iminyaka kunye namava okoko wanikela okokuqala (AR Drone) ubanike isikhundla sokuba ziinkampani ezimbalwa kakhulu ezinokulwa, kwaye ngawo onke amava afakwe kwiimveliso zabo sifumana izipho ezilula ukuziphatha, ezinganyangekiyo, ezikrelekrele kwaye ezivula ilizwe elitsha elinokubakho.
Ukuthatha ithuba lamava afunyenwe kwi-AR Drone, uParrot wakhupha usapho MiniDrones, usapho lwezipho ezincinci ezilawulwa kwi-smartphone okanye ithebhulethi yethu ezinokusebenza ngaphakathi nangaphakathi, ngamanyathelo okhuseleko kunye nokuphunyezwa okungagungqiyo okuvumela nabancinci okanye abangenamava ukuba basebenzise ezi zixhobo ngaphandle kwento yokoyika.
1 Ukutsiba uSumo
1.2 Ukusasaza ngexesha lokwenyani
1.3 Idrone enobubele
1.4 Intaka engenamaphiko
1.5 Idrone enokwenza nantoni na
1.6 U bulumko
1.11 Izimvo zoMhleli
Kodwa namhlanje siza kuthetha ngomnye ngokukodwa, nangona olu sapho lweMiniDrones lunomhlaba, umoya kunye neeyunithi zamanzi, namhlanje siza kuthetha ngazo Ukutsiba uSumo, umhloli omncinci omncinci, nangona engenawo amaphiko, kodwa naye akazidingi.
I-Jumping Sumo ayisiyiyo idrone ebhabha, yinto enomdla enamavili amabini amakhulu njengale evumela ukuhamba okumangalisayo kunye nesantya se ukuya kuthi ga kwi-7Km / ngeyure, ngaphezulu kokwanele ukuphonononga ikhaya lakho ukusuka kwintuthuzelo yesofa yakho kunye nokubona umhlaba ukwenye indlela.
Ukusasaza ngexesha lokwenyani
Kwaye kwesi santya sikhatshwa yikhamera esempumlweni engamvumeli kuphela ukuba afote kunye neevidiyo kodwa enze ukusasaza ngexesha lokwenyani Ukusuka kwinto eyibonwayo yidrone kwisixhobo esisebenza kuyo, oku kusenza silibale malunga nokuyilandela ukuyiphatha, ngokulula ukuvula usetyenziso, ukhululeke kwaye ubaleke.
Ewe kunjalo, ukuba sifuna ukwenza ividiyo kufuneka sifake i-USB kwizibuko le-OTG ukuze isebenzise esi sithuba njengokugcina, kwelinye icala, iifoto zigcinwa kwimemori yazo kwaye kamva zinokudluliselwa nge-Wi- Fi kwi-smartphone okanye ithebhulethi yethu.
Njengokuba konke oko kwakunganelanga, oku kuyakwenziwa akuyi kukhathaza mntu, kwaye nabani na oyibonayo iwela kuphambene uthando, yinto entle eyenziweyo ukuya kuthi ga apho ithi ibethe into izakhalaza, kwaye ilumkise nangezandi ezincinci linganisa iimvakalelo) xa ejika, xa ezenzakalisile, okanye xa indlela yakhe iphazamisekile.
I-Sumping Sumo encinci ayinakubhabha nayo, njengoko besesitshilo ngaphambi kokuba ibe ngumphandi onomdla ngaphandle kwamaphiko, nangona kunjalo ayizukuyicothisa, kwaye enkosi kwimoto yayo enamandla yokutsiba (ngohlobo lomsila) Iyakwazi ukutsiba ixesha elide nokuphakamaOku kukuvumela ukuba ufike nakweyiphi na indawo, thintela nawuphi na umqobo kwaye uhambe ukusuka kwitafile ukuya kwenye ngaphandle koloyiko, ewe, ukuba nje umgama okanye ukuphakama akudluli kwimitha enye, kuba le injini yokutsiba ikuvumela ukuba uthathe indawo Isentimitha ezingama-80 (ezingabalulekanga) kwaye ziwe ngokungathi akwenzekanga nto.
Idrone enokwenza nantoni na
Uyakucinga ukuba ukutsiba okunje kungabeka idrone emngciphekweni, kodwa akukho nto ingaphaya, iivili zayo zigutyungelwe ngogwebu ukuyenza ibe lula kwaye imelane nomhlaba, into evumela ukuba umqamelo uwele ngokugqibeleleyo, kwaye umsila wayo uneerabha Ukugquma okuya kukuvumela ukuba udlule apho kufanelekileyo ngaphandle kokufumana monakalo, kwaye ngaphandle kokuba unomdla wokwazi kuyaxhathisa kakhulu, yiyo loo nto nabancinci beya kukwazi ukusebenzisa le drone imnandi ngaphandle kokukhathazeka ukuba iyaqhekeka , kuba yenziwe ukuba ihlale ihleli.
Kulapho amava kaParrot kule ntsimi abonisa khona, kwaye kukuba idrone ixhotyiswe nge-gyroscope kunye nesantya, ezi sensors zidityanisiweyo zibonelela ngeJumping Sumo nge-inertia esembindini eya kuyivumela ukuba iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde isiphumelele. isikhundla esiwayo, kwaye silungise nokuqhelaniswa naso ukuba kukho isithintelo esincinci esenze ukuba sahluke kuyo.
La ibhetri iyasuswa, Oku kuvumela ukuba ukuba idrone yethu iyayigqiba Imizuzu engama-20 yokuzimela (ekusebenzeni rhoqo) sinokuyibuyisela enye kwaye siqhubeke nokuzonwabisa kwethu, ngaphandle kwamathandabuzo zimbalwa iidrones zolu bungakanani zifezekisa ukuzimela okuhloniphekileyo (kunganyanzelekanga ukuba siqhubele phambili ukuhambisa abaxhasi kuyanceda), kwaye xa zombini zigqibile siya kufuna kuphela Iyure kunye nesiqingatha sokubenza balungele isenzo kwakhona.
Ukuqhagamshela kwi-drone, isebenzisa iWi-Fi, Ukutsiba i-Sumo iyakwazi ukwenza indawo yokufikelela (ungakhetha nokuba sifuna ukuba yi-2'4 okanye i-5Ghz), esiya kuthi sinxibelelane nayo kwisixhobo sethu kwaye siqale ukubona yonke into eyibonayo. Singalitshintsha igama lale nethiwekhi ukuze siyiqonde ngcono i-drone yethu, kwaye ukhuseleko luya kuvumela kuphela unxibelelwano lomthengi omnye, ngale ndlela sithintela umntu ekuthinjweni kwedrone okanye nokubona oko kubonwa yidrone yethu bukhoma.
Isicelo sasimahla (iFreeFlight 3) kulawulo lwesixhobo kunye nokusasaza okwenyani kwe-iOS, i-Android kunye neFowuni yeWindows.
I-Wi-Fi 802.11 AC ye-2'4 kunye ne5Ghz.
Uluhlu ukuya kwiimitha ezingama-50.
Inertial central kunye gyroscope kunye accelerometer.
Ikhamera ye-Wide-angle ene-640 x 480 isisombululo kwi-15 fps.
Ibhetri yeLithium Polymer enokutshintsha inokubakho nomthamo we-550mAh.
Imoto yokuhamba ngokuzimeleyo kwivili nganye (isantya esiphezulu ukuya kuthi ga kwi-7Km / h ehlengahlengiswayo ukusuka kwisicelo).
Imoto emile ngomsila ngasemva (tsiba ukuya kuthi ga kwi-80cm ukuphakama).
Ii-LED zangaphambili ezitshintsha umbala (phakathi kohlaza kunye nobomvu) ngokwemo yedrone.
Isandisi-lizwi esinevolumu ehlengahlengisiweyo ukukhupha izandi ezilinganisa imeko yakho.
Ukuxhathisa kwayo okuphezulu kuvumela ukuba iphathwe ngaphandle koloyiko lokuyaphula.
Ndiyabulela kwisoftware esekwe kwiLinux kunye nee-sensors ezakhelweyo, ukuqhuba kulula kakhulu ukuba nabani na angayenza.
Ukuzimela okukhulu kunye nebhetri enokutshintsha.
Izandi kunye noopopayi bayenza ibe mnandi kakhulu kusapho.
Uhlelo lokusebenza lwasimahla lweFreeFlight 3 lubandakanya izithintelo ezichazwe kwangaphambili ezenziwa ngokucofa iqhosha.
Ikuvumela ukuba usasaze okubonayo, uthathe iifoto kunye nevidiyo.
Ukutsiba kwayo kuyakuvumela ukuba iqhubele phambili kuwo nawuphi na umqobo.
I-Wi-Fi AC yoluhlu lweemitha ezingama-50 kunye nonxibelelwano oluzinzileyo nolugudileyo.
Ubungakanani bayo obuncinci benza ukuba ifaneleke ngaphakathi.
Ixabiso le- € 99 likhuphisana kakhulu kweli candelo.
Ukukhawuleza ukujika nokuba yi-180º
Ukujika kufuneka ukwenze kwii-engile, nto leyo ethintela kancinci ukuhamba kwakho
Ukusonjululwa kwekhamera kunokuba ngcono.
Kwindawo yesanti kakhulu ungabanjiswa.
S Parrot Ukutsiba Sumo
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Izixhobo ze-IP » Sivavanye iParrot Jumping Sumo, idrone yasemhlabeni enomphefumlo womphandi
Ewe ndiyathemba ukuba ayophuli, uya kuba neengxaki ukuyisa kwinkonzo yezobuchwephesha, kwaye uyilungise
Uphengululo lwegajethi eyona nto iphambili kuyo yile "iyenzayo" kwaye awubeki vidiyo ilusizi ... intetho eninzi kwaye akukho nto iyenye
Ngaba ingasetyenziswa kuphela yi-wifi? Ke ukusetyenziswa kwekhaya kunye nesitalato, akunjalo?
I-Admtonin bendidinga uncedo lwenkonzo yezobuchwephesha ukubuyisela amanye amalungu (ukutsiba kakhulu) kwaye bayisombulula ngokukhawuleza.
Ubawo uRobert Palladino, ophefumlele uhlobo lweMac typeface, usweleke eneminyaka engama-83